Dibanisa imibala yoyilo lwakho kunye neAdobe Colour CC | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Tshatisa imibala yoyilo lwakho kunye neAdobe Colour CC.
Uvile nge umbala weengqondo kunye nokubaluleka kwesizinda sayo ukwenza uyilo olulungileyo. Yintoni umbala ngamnye kunye nendibaniselwano enokuthi ihambise kuthi ngokwahlukeneyo yinto ekufuneka uyazi ukuba ufuna uyilo lwakho ukunxibelelana nomyalezo ngokuchanekileyo.
Xa uyila, umntu kufuneka aqwalasele imiba yobuhle enjengokwakhiwa, ibhalansi phakathi kwazo zonke izinto, ukusetyenziswa kwendlela efanelekileyo yokuchwetheza ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kombala.
Kulo mfanekiso ulandelayo sikushiya umzekelo wokusetyenziswa kombala ziintlobo ezahlukeneyo. Olu khetho lombala luhlala luqwalasele amaxabiso ofuna ukuwadlulisa.
Ukukhetha umbala ayisiyonto ilula kwaye nangaphantsi ukudibanisa imibala emininzi ngaxeshanye, ke sikuphathela isixhobo esinokukunceda ufumane indibaniselwano egqibeleleyo, Umbala weAdobe CC ivili lemibala ekuvumela ukuba udibanise i-analogous, monochromatic, triad, complementary, imibala edityanisiweyo, ngemibala kwaye, ewe, yenza ngokwezifiso ukuthanda kwakho. Ukusebenzisa esi sixhobo sikucebisa ukuba wazi kakuhle ulungiselelo lwemibala kwisangqa se-chromatic.
Phambi kokuba uhle uye emsebenzini, siza kuchaza umbono osisiseko ngombala ukuze uqale ukusebenzisa oku Isixhobo seAdobe:
Los imibala efanayo Zizo ezo zikwinkqubo ehambelanayo omnye komnye, umzekelo, imibala efana neorenji iya kuba bomvu notyheli.
Los imibala ye-monochromeNjengoko igama layo lisitsho, zingumbala ofanayo, umzekelo, imibala eyahlukileyo yohlaza okwesibhakabhaka.
Omnye oziqu zithathu Yimibala efumaneka kwisangqa se-chromatic ecwangciswe ngokumila koonxantathu abalinganayo, umzekelo orenji, mfusa kunye nohlaza.
Los imibala ehambelana nayo ezi zikwelinye icala elikwelinye icala ivili lombala, umzekelo obomvu nohlaza.
Ngoku, ungaqala ukudala indibaniselwano yakho yombala kwaye unike uyilo lwakho intsingiselo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Tshatisa imibala yoyilo lwakho kunye neAdobe Colour CC.
Umfanekiso omtsha weFeria Hábitat València 2020
Nokuba "iGolide yeRatio" okanye iRhafu yeGolide ayikwazi ukugcina uyilo lwetopiki yeTesla